စစ်ကိုင်းမြို့မှာ ရှေးယခင်ကတည်းက ကျင်းပလာတဲ့ ဘဲဥထုပွဲတော် စတင်
February 7, 2020 Alinn Pya 0
စစ်ကိုင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၇-၂၀၂၀ ရှိုင်းအောင် စစ်ကိုင်းမြို့၊ ဧမြဝတီရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဇိနမာရ်အောင် လောကချမ်းသာ (ကြေးဘုရားကြီး)ရဲ့ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်မှာ ရိုးရာအစဉ်အလာမပြတ် ထည့်သွင်းကျင်းပလာခဲ့တဲ့ ဘဲဥ ထုပွဲတော်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းအချိန်က စတင်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ် လပြည့်မတိုင်ခင်တစ်ရက်ကနေ လပြည့်နေ့ နဲ့ လပြည့်ကျော် ၁ရက် စုစုပေါင်း ၃ရက်လုပ်တဲ့ပွဲပါ။ ဘဲဥထုပွဲသွားမယ်ဆို စစ်ကိုင်းတံတားကနေဆင်းရင် ကမ်းနားလမ်းအတိုင်း ဘယ်ဘက်ချိုးပြီး စစ်ကိုင်းကြေးဘုရားကြီးဆီအရောက်သွားရပါတယ်။ ဘဲဥထုပွဲဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဒီတစ်နေရာတည်း တစ်နှစ်တစ်ခါ […]
ဝါညစ်နေတဲ့သွားကို သဘာဝအတိုင်းဖြူဝင်းလာစေမယ့်နည်းလမ်း (၅)မျိုး
သွားဖြူဖြူလေးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတယ်မလား။ သွားဝါပြီး မဲညစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သွားဖြူဝင်းလာဖို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူတွေများစွာရှိကြပါတယ်။ ဈေးကြီးပေးပြီး သွားဖြူအောင်လုပ်ကြတယ်သူတွေက များပါတယ်။ ပိုက်ဆံအရမ်းကြီးမကုန်ဘဲ သွားဖြူလာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ သွားကိုဖြူဝင်းလာအောင်လုပ်နိုင်ပြီး ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ ပြုံးရယ်ပြနိုင်မှာပါနော်..။ ကဲ ဘယ်လိုနည်းတွေလည်းဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်..။ (၁) ချင်း (ဂျင်း) နဲ့ ဆား သွားဖြူဝင်းလာဖို့ဆိုရင် ချင်း (ဂျင်း)၊ ဆား နဲ့ သံပုရာသီးတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာက […]
အင်တာနက်ပေါ်မှာ အရမ်းကို လူကြိုက်များနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းဆရာမလေးရဲ့ စိတ်ကူး
အင်တာနက်ပေါ်မှာ အရမ်းကို လူကြိုက်များနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းဆရာမလေးရဲ့ စိတ်ကူး တကယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိပြီး ချီးကျူးလေးစားဖွယ်လုပ်ရပ်လေ: ဆရာ/ဆရာမတွေဆိုတာ ကလေးတွေကို နာ ၃ နာနဲ့ စာသင်ကြားပေးနေသူတွေပါ… မိမိတို့အကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲ အနာဂတ်မှာ အားကိုးရတဲ့ ခေါင်းဆောင်ငယ်လေးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို နိုင်ငံ့အကျိုးအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ဒါ့အပြင် မိဘတွေကိုယ်စား ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးကြသူတွေဆိုလည်း မမှားပါဘူးဒီလို ကျေးဇူးတွေရှိတဲ့ ဆရာ/ဆရာမတွေထဲက ဆရာမလေးတစ်ဦးရဲ့ ကလေးတွေအပေါ် ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးလေးက လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေပန်းစားနေတာပါ…. […]
အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ ဆင်းရဲသားပြည်သူများကို အမြန်ဆုံးကူညီပေးကြပါ
အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ ဆင်းရဲသားပြည်သူများကို အမြန်ဆုံးကူညီပေးကြပါ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့က ဥပဒေမဲ့ အင်အားသုံး အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရသော ဖြစ်စဉ်များ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့က မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ရေလောင်ကျေးရွာ အနောက်ဘက် ရေလောင်တောင်သူမှ အကွက်ရိုက်ရောင်းချထားသော မြေကွက်များပေါ်တွင် ဝယ်ယူဆောက်လုပ်နေထိုင်လျှက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသား ဆင်းရဲသားများသည် အစိုးရညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ဟုဆိုကာ ရဲအင်အား အလုံးအရင်း၊ စည်ပင်သာယာဝန်ထမ်းအင်အား မြောက်များစွာ အပါအဝင် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုုပ်ရေးဦးစီးဌာန […]
CB Bank ဘဏ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် ပါဝင်သည့် မော်တော်ယာဉ်ကို သာကေတတွင်ဖမ်းမိထား
ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ် ပင်လုံလမ်းပေါ်ရှိ CB Bank ကို ယနေ့ နံနက်အစောပိုင်းက အငှားယာဉ်နံပါတ် CC-9965 နံပါတ်ဖြင့် စီးလာသော ယာဉ်ပေါ်မှ လူ နှစ်ဦးက ဓားပြတိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ CB ဘဏ်ခွဲမှ ကျပ်သိန်း ၆၀၀ ဓားပြတိုက်သွားပြီး ထားရှိခဲ့သောဗုံးမှာလည်း အတုဖြစ်ကြောင်း ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောသည်။ အဆိုပါ တရားခံ နှစ်ဦးဟာ ယခုအချိန်ထိလွတ်မြောက်နေပြီး ၎င်းတို့စီးနင်းလာတဲ့ မော်တော်ယာဉ် CC-9965 Probox […]